Blog Reader: [သီချင်းကြိုက်တဲ့အရူးလေး] 25 New Entries: ...အိပ်မက်ယောင်တဲ့..မိုးပြေး...
[သီချင်းကြိုက်တဲ့အရူးလေး] 25 New Entries: ...အိပ်မက်ယောင်တဲ့..မိုးပြေး...
မျက်ရည်အိုင်သောနေ့ (အာဇာနည်နေ့ သို့)
၁)နီတျာတျာလျှင်......သွေးဖြာလွှမ်းရစ် ၊ သမိုင်းသစ်လော့။(၂)မိုးပြာပြာတွင်....တိမ်လွှာဖယ်ပစ်၊ သင်တိုင်းလှစ်လော့။(၃)လွမ်းဗျာပါလျှင် .....မျက်နှာမှိုင်းညို ၊ ပါးမို့မို့နှင့်သျှင်တို့ေ နပြည် ၊ လွမ်းမောစည်စွကြုံလည်းနှောင်းခေတ် ၊ လွမ်းလှိုင်းနစ်လော့။(၄)ညစ်မှောင် မှုန်လွှမ်း၊ မိုးပြည့်ပြွမ်းသည်ယမ်းငွေ့နှင့်ယှက် ၊ တိမ်ညိုခက်တို့ထက်သက်စုန်ဆန် ၊ လူးလာပြန်အော င်ဒေါမာန်ရိုက်ခတ်၊ ဟူးဟူးလွှတ်၍သူသတ်သမား၊ ညစ်ထွားထွားတို့မျိုးသားထွတ်ခေါင် ၊ ပြည့်ခေါင်းဆောင်ကိုလူ့ဘောင်ခ မ်းဝါ ၊ သိမ့်သိမ့် ခါမျှပစ်လှာမစဲ ၊ ကျည်ဆန်ဝဲ သော်သေပွဲသေပန်းပွင့်သတည်း။(၅)မြို့နှင့် ရွာဆက်၊ အုန်းအုန်းကျွက်တည့်ပွက်ပွက်ထ န်ထန်၊အော်ဟစ်ပြန်ရင်းဗြောင်းဆန်ကြေကွဲ၊ငိုသည့်ပွဲတည့်ကျိုးကျဲဆံဖြူ၊ နားအူအူနှင့်ဖျင်ထူလက် လျှို၊ အမေအိုလည်းငို၍မဆုံး၊ခါးကုန်းကုန်းနှင့်တောလုံးဆူညံ၊လေ၀ယ်ပျံခဲ့။(၆)တောင်သူယာလုပ်၊ ဓားမခုတ်နှင့် ပုတ်ပြတ်ေ န့စား ၊ လယ်သမားတို့ယောက်ျားဂုဏ်ရည်၊ တန့်မဆည်နိုင်မကြည်မသက်၊ မျက်ရည်စက်ဖြင့် လက်ခမောင်းခတ်၊ ပြေးသွားလတ်၏ထေရ်မြတ်စံပျော်၊ရွာကျောင်းတော်သို့ဟစ်အော်သံဝါတို့၊ ငိုသံပါနှ င့်လျှောက်ရှာသည်ကား "ဘုန်းဘုရား"........။(၇)"လွတ်လပ်ရေးအတွက်၊ မျိုးမာန်တက်စွပြည်သက်အားထား၊ ရွှေတောင်လားသို့မားမားခံ့ခံ့၊ သတ္တိဟန့်နှင့်မဆန့်ဂုဏ်အင်၊ပြည့်စုံလ င်သောပြည်တွင်ကဲလုပ်၊ လွန်ကြိုးကုပ်သူဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊စည်းဝေးခန်းတွင်ယုတ်ကန်းဆိုးဝါး၊သူသတ်များသို့ကျည်းအားသွန်မွှေ့၊ လုပ်ကြံရွေ့ကြောင့်ရင်ပွေ့ယိုင်လဲ၊ သွေးအိုင်ထဲဝယ်ပြိုကွဲနားညည်း၊ ပွဲချင်းပြီးပင်ဝန်ကြီးများနှင့် ၊သေပန်းပွင့်ပေါ့"ရင်နင့်ဗျာ ဝေ၊တင်လျှောက် လေသော်ထေရ်ဝါမြတ်လည်း၊တက်ခေါက်ကျည်းဘိ။(ဃသသူကြုံသည့်ြ ဖစ်အင်၊မပြောချင် တော့မြေပြင်တု န်လျက်၊ငိုသံအက်နှင့်ဆက်ငိုရင်းသာ ၊ငိုကြပါခဲ့ တစ်ခါတစ်ေ ခတ်၊သမိုင်းသစ်လွင်ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲ၊မကြုံရဲတော့ရှောင်လွှဲနိုင်က၊သြော်.... .ကောင်းစွရှင့်။(၉)ညအိမ်မက်ဆိုး၊ လက်တွေ့တိုးသို့ညှိုးငယ်မျက်နှာ၊ မသာယာကြကြမ္မာဖိစီး၊ ရှားမီးကျီးဝယ်ရင်လှီးဖောက်ဖြတ်၊ ၀ါးညှပ်ပိတ်ေ သာသည်းပွတ်နှလုံး၊မီးကင်အုံးသို့ယူကျုံးမနိုင်၊ သောကလှိုင် စွရင်ဆိုင်တူရူ၊အောင်ပွဲယူသောရန်သူအို.. ....သေမင်း၊ စစ်မခင်းရလေလူချင်းဖြစ်က၊ ယှဉ်ပြိုင်ကြအံ့စိတ်မှခဲခဲ၊ အံကြိတ်မဲရင်းပုလဲတစ်လုံး၊ရွဲတစ်လုံးပင်သွေးဖုံးမျက်ရည်၊ စီးရစ်လည်သော်ဇာနည်မော် ကွန်း၊ ညစ်ထပ်စွန်းဘိဥဒါန်းကမ္ဘာ မကြေသာတကား။ ။
ချစ်သူမင်းနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းမှာပဲအချစ်ကိုစတွေ့တယ်လို့တော့ မလိမ်ညာပါဘူး ။မင်းနဲ့ဝေးမှတစ်ခါမှမလိုချင်ဖူးတဲ့အမုန်းဆုံးအရာဖြစ်တဲ့အလွမ်းတွေကိုမင်းအတွက်နဲ့ဖက်တွယ်မိတော့မှပဲမင်းကိုချစ်မိမှန်းသိခဲ့တာပါ ။တမ်းတတယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေကငါ့ဒိုင်ယာရီမှာ
မင်းနာမည်တွေခေါင်းစဉ်တပ်ပြီးနေရာတွေထပ်နေပြီ ။မင်းနဲ့ငါလက်မတွဲပဲ လမ်းတွေကို တူတူလျှောက်ဖူးတယ် ။တိုင်ပင်မထားပဲသီချင်းတွေကို တူတူဆိုဖူးတယ် ။ဘာမှမပြောပဲနဲ့အူလှိုက်သဲလှိုက် ထိုင်ရယ်ဖူးတယ်။အကြောင်းမကြားပဲ နင်ရောက်လာပြီးမနှုတ်ဆက်ပဲ နင်ထွက်သွားတော့အမှတ်တမဲ့တွေကအမှတ်တရတွေ ဖြစ်ရပြီပေါ့။နင်ရောက်လာတာ တစ်ခဏပါငါလွမ်းနေတာ တစ်ဘ၀အတွက်ဆိုတော့လည်းပြန်လာနိုင်ခွင့်မရှိတဲ့နင့်ကိုပြန်လာပါလို့မတောင်းဆိုပါဘူးအဝေးထွက်သွားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ငါကိုလည်းနီးနီးလေးမှာနေပေးဖို့ မတောင်းဆိုပါနဲ့နော်။ဘ၀ခရီးအတွက်ကြိုးစားနေရင်းဝေးရမှာမို့ မုန်းလိုက်ပါတော့လို့ မပြောရက်တော့လည်းငါ့ကိုယုံကြည်မှုလေး တစ်ခုနဲ့ ဆက်ချစ်နေပေးပါ၊တကယ်တော့မင်းကငါ့ရဲ့ထာဝရမဆုံနိုင်တဲ့မျဉ်းပြိုင်ကလေးတစ်ကြောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်ငါကဆက်ချစ်နေဦးမှာပါ။......................ချစ်သောသူသိနိုင်ပါစေ။
ငလျင်လှိုင်းထ ခဲကျရေပြင် မောင့်သဲပြင်မှာ မညိမ်မသက် ငိုကြွေးလျှက်က သိမ့်သိမ့်ရှိုက်သံ ညိမ်သက်ရန်မှာ ခက်ခဲလေတယ် ..... မရယ် တကယ်ဆိုမေကမရ တမ်းတလျှက်က မရယ်သံကြား မောင့်နှလုံးသားက လိမ့်ကာပြုတ်ကျ .. မမ ... မမ ခေါ်၍နေတုန်း ချစ်ပါဦးလား ...... မရယ် အခုတော့ဖြစ်လေ အချစ်ဆုံးမက ချစ်သူကောက်ရ သိပ်ချစ်သမျှပြောပြလာမှ နှလုံးသားကြွေမြွ မခြေရင်းမှ ချစ်တယ်အော်ရင်း သေးဆုံးခြင်းက ပျက်သုန်းရွင်းတိုင် ချစ်နေဦးမယ် .......... မမရယ်
ပိုးကောင်နဲ့စုဘူးကသူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းလေးကို မပြောခင် ပိုးကောင်ရဲ့ဘ၀ကိုအရင်ပြောပြချင်ပါတယ် ပိုးကောင်က မောင်နှမသားချင်းတွေထဲမှာအကြီးဆုံးသား… နှစ်ဘက်သော ဘိုးဘိုး.ဘွားဘွားတို့ရဲ့ မြေးဦး… ဖေဖေနဲ့မေမေ နှစ်ဘက်စလုံးမှာတစ်ဦးတည်းသောသားယောက်ျားလေး… တစ်ယောက်တည်းရှားရှားပါးပါးယောက်ျားလေးပါတယ်ဆိုပေမယ့် အလိုလိုက်ခြင်းကို လုံးဝမခံခဲ့ရဘူး… အရမ်းတင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့ ချုပ်ချယ်မှုတွေကို အရမ်းခံခဲ့ရတယ်… တိုင်ပင်ဖော်ညီအစ်ကို ဆိုတာလုံးဝမရှိခဲ့ဘူး… သူများတွေ ညီလေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင်… သူတို့အစ်ကိုတွေက ဖေးမရင် အရမ်းကိုအားကျခဲ့တယ်… အခုတော့ ဘာညီအစ်ကိုမှမလိုတော့ဘူး… ပိုးကောင်ဘ၀မှာ စုဘူးကမောင်နှမတွေရခဲ့ပြီ… သူတို့က အရမ်းကိုခင်ဖို့ကောင်းသလို တကယ့်ကို ညီလေးတစ်ယောက်. မောင်လေးတစ်ယောက်လို ဆက်ဆံပေးခဲ့တယ်… အရမ်းပျော်မိသလို… ခင်ပေးခဲ့တယ် အစ်ကိုအစ်မတွေကိုလည်းအရမ်းကိုကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်… တကယ်ပါ… ပေါက်ကရတွေအရမ်းပြောတဲ့ ၀ါဝါ (သူရဿဝါ). တစ်ခါတည်းပါဆိုတဲ့ စိုးမိုး (ဆိုလ်းဒေ၀ဒတ်). ငှက်ပျောတုံးဖက်ပြီးလွမ်းနေတတ်တဲ့ ၀ိုင်. ညီလေးတစ်ယောက်လို အလိုလိုက်တဲ့ ကိုကြီးဇော်ဝင်းမြတ်. အပြုံးလေးနဲ့ဆုံးမတတ်တဲ့ ကိုလူလိန်. ကွန်ပျူတာနဲ့ပက်သက်ပြီး လမ်းပြပေးတဲ့ ကိုရွှေဘုန်းလူ. သားရယ်လို့ခေါ်တတ်တဲ့ ကိုဒီမွန် (ဒီဒီ). ကောင်မလို့ ခေါ်ခေါ်နေတဲ့ ကိုအောက်ဆီ (အလွမ်းမျက်ရည်). မောင်လေးတစ်ယောက်လို ဂရုစိုက်တတ်တဲ့ မငယ်. သူငယ်ချင်းတွေဆုံတိုင်း အိမ်ကိုအတင်းပြန်ချင်တဲ့ ဆာမူရိုင်း. စကားပြောရင် ညစ်ကပ်ကပ်နိုင်တဲ့ သံယောဇဉ်. လူနဲ့မုန့်အတူတူလာရင် မုန့်ကိုအရင်နှုတ်ဆက်တဲ့ မိုးပြေး. အင်တာနက်အလကားပေးသုံးတဲ့ မမီးမီး. နဲ့ အခြားသောသူငယ်ချင်းများကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ခဲ့တယ်… ဒီလူတွေနဲ့တွေမှ ပိုးကောင်ဘ၀မှာ အသက် (20) ရောက်တော့မှ ပထမဆုံး New Year ဆိုတာကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်… ပျော်စရာဆိုတာတွေကို လက်တွေ့ခံစားမိခဲ့တယ်… အိမ်ကလည်း စုဘူးက အစ်ကိုအစ်မတွေနဲ့ဆိုရင် စိတ်ချတယ်… ညဘက်တွေဘာတွေတောင် စုဘူးကလူတွေနဲ့ဆို ပေးထွက်တယ်… ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီလိုပျော်ရွှင်မှုလေးတွေကို တစ်သက်လုံးသိမ်းထားချင်တယ်… စုဘူးက အစ်ကိုအစ်မတွေနဲ့ အမြဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေချင်ပါတယ်…
ပျော်ရွင်မူ့တွေ ခံစားနိုင်ပါစေ ကိုယ်ပြုတဲ့ကံကြောင့် အားလုံးအပေါ်မှာ မေတ္တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ သူငယ်ချင်း..... မင်းအမှားတွေကြောင့် မင်းလိုချင်ခဲ့တဲ့..... အားလုံးစီက ... အပြုံးလေးတွေကိုမင်းမပိုင်ဆိုင်လိုက်ရဘူးနော် မင်းအမှားတွေကမင်းကိုဒဏ်ခတ်လိုက်တာပါ မင်းအမှားရှိရင်မမှန်ဆိုတာရှိပါတယ် ကြိုးစားပေါ့ကွ.... အားလုံးဟာကိုယ်ဘ၀ကိုရပ်တည်ဖို့ပေါ့ မင်းအတွက်လိုချင်တဲ့အချိန်မှာ ငါတို့ကိုတောင်းတလိုက်ပါ... လူမရောက်နိုင်ရင်တောင်မှ... ငါစိတ်ကနေမင်းကိုနှစ်သိမ့်နေမှာပါ သူငယ်ချင်းရယ်.........................
မချစ်တတ်တဲ့ ငါနှလုံးသားကို... ချစ်တတ်အောင်သင်ပေး... ရင်မခုန်တတ်တဲ့ငါနှလုံးခံသံက... မင်းနဲ့တွေ့မှာ ရင်ခုန်မြန်ခဲ့... မင်းမျက်ဝန်းအကြည့်နဲ့တင်.. သေလောက်တဲ့ငါကို..... မင်းရဲ့ အပြူံးချိုလေးပြလိုက်တော့.. ငါသတိမေ့သွားမတတ်ခံစားတယ်ဟာ.. ထူးဆန်းလွန်းတဲ့..ငါချစ်ခြင်းကို လမ်းပြပေးတဲ့နင်ကို... ငါရင်ထဲက .... အချစ်မှော်ဆရာမလေးလို့ ခေါ်ခွင့်ပြုပါနော်................
ချစ်သူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်အကျွန်ုပ် လက်လေးကို ကိုင်လိုက်မိတယ် . . . .ဒါနဲ့ . . .ရင်ခွင်ဘယ်ဘက် နှလုံးတည့်တည့်မှာမီးရထားတွေ ခုတ်မောင်းပြီးမောဟိုက်သွားတယ် . . .ဒီမီးရထားတွေ ချစ်သူဆီသို့ လှမ်းဝင်ပြီးရင်ခွင်ထဲမှာ ခတ္တနားတယ်ဒါပေမယ့် . . .ခရီးက မဆုံးသေးဘူး . . .မီးရထားလည်း ခုတ်မောင်းဆဲ . .အကျွန်ုပ်လည်း မောဟိုက်ဆဲရောက်ခဲ့ပြန်ပြီ . . . ချစ်သူဆီသို့အနမ်းဘူတာမှာ ခပ်ကြာကြာနားလိုက်တယ် . . .ဒါပေမယ့် . . .ခရီးမဆုံးသေး . . .မီးရထားလည်း ပိုလို့မြန်မြန်ခုတ်မောင်းဆဲ . . .အကျွန်ုပ်လည်း ရင်တုန်လောက်အောင် မောဟိုက်ဆဲ . . .ဘယ်သို့ ဘယ်ကို ရောက်မှရင်ထဲက ရထား အနားရမလဲ . . .အကျွန်ုပ် အမောဖြေရမလဲ . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . .. . . . .. . . ..
အပြုံးတွေနဲ့ နေခြည်တွေဖြာ ဖို့
ငါချစ်သူ . . . နင်
မတွေးထားပါဘူး . . .
နင်မကြိုက်ရင် . . . ငါမငိုပါဘူး
လမ်းတွေဆုံးသွားရင် . . .
ပေးဆပ်ခွင့်ရခဲ့လို့လေ . . . ။ ။
သားသမီးလက်ကိုဆွဲ.....သားရေသမီးရေ....ဖေဖေပြန်လာပြီဆိုတဲ့ မိသားစု ဘ၀မှာ ငါမပါဘူး....
ငါ့မှာ အဖေ ဆိုတဲ့ သက်ရှိထင်ရှားလူတစ်ယောက်လုံးရှိတယ်...ဒါပေမဲ့..ငါ့ဘ၀ မှာ အဖေဆို တာ 2004
အဖေ ဆိုတာကိုလည်းမလိုချင်ဘူး......ငါ့ဘ၀မှာ ချစ်သူရည်းစားမရှိလို့သေတဲ့ထဲမှာငါမပါသလို...အဖေ မရှိရင်လည်း
အဲ့ဒီလိုမေးမဲ့အဖေမျိုးကိုငါအရမ်းလိုချင်မိတယ်....သူများတွေက ငါ့ဖေဖေက ငါ့ကိုဘယ်ဆိုင်ခေါ်သွားပြီးဘာတွေကျွေးတာ...
မင်းက...... ငါ့အိမ်မက်တွေရဲ့ ကောင်းကင်မှာ လင်းလက်တဲ့ ကြယ်စင်ပါ.........။။ ငါ့မျှော်လင့်ချက် အာသီသနဲ့မင်းကို အမြဲတစေ မော်ဖူးရတယ်....။။ ငါ့ဘ၀အနာဂတ်တွေ တေးကဗျာတွေအတွက် အချက်အလက်ရှာပေးသူရေ.......... မင်းရဲ့ စူးစိုက်တဲ့အကြည့်ကြောင့် ဘယ်ဘက်ရင်အုံရဲ့နက်ရှိုင်းရာမှာ နှင်းဆီရောင်နီမြန်းနေတယ်........။။ ငါ့သံယောဇဉ်တွေ အရိပ်ထိုးလို့မင်းမျက်လုံးတွေ အမှောင်ဖုံးစေသလားချစ်သူ...။။။ မသေပျောက်နိုင်တဲ့ ကိုယ့်အိမ်မက်တွေထဲမှာ(ပဲ) အခြေတကျနေပါတော့ ချစ်သူရယ်..........။။။။။
ခမောက်ဆောင်းပြီး ခေတ်တစ်ခေတ်ကို အသွင်ပြောင်းချင်တဲ့
ကမ္ဘာမြေပန်းခင်းမှာ အမေ ငြိမ်းချမ်းရေး ပန်းတစ်ခြင်းပျိုးခဲ့ပါပြီ။
xxx အဖေ...ခွေးအတွေ ..ချောင်းကိုက်လို့ 
xxx အဖေ...တိုက်ယူခဲ့ တဲ့ ..လွတ်လပ်ရေး
အခွင့် ကောင်းကိုစောင့် ..
၂၆ နှစ် မဆလ စနစ်ဆိုးအောက်..
ဘ၀တွေ..နစ်ခဲ့ ရပေါ့ ...။
ကျနော်တို့ ဗမာလူသားတွေအမျိုး ၊ဘာသာ ၊သာသနာ..ပျောက်
နိုင်ငံမှောက်ပြီး..အမျိုးတုန်းလို့ ကုန်းကောက်စရာ..မရှိတော့ ပြီ..။
"ကျွန်တော့်ကို အဖြေရှာပေးပါ"လို့ ။ ။
အဝေးကချစ်သူအတွက် ( အလွမ်း ကဗျာ )
တနယ်စီဝေးနေရတယ် - - - - - - - -လွမ်းရတယ်
ကျွန်တော်အတွက် မ--------နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အရာတွေတိုင်းဟာ
လမ်းထိပ်က အောင်နက်တို့ မိကျားတို့ အုပ်စုရဲ့ ဟောင်သံကိုကြားလိုက်ရကတည်းက သူမူးပြီးပြန်လာပြီဟု အတတ်သိလိုက်သည်၊ ကြားလိုက်ရသော နောက်ဆက်တွဲ အသံများက ထင်မြင်ချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာသွားစေသည်။သိုင်းကွက်နင်းလာသော သူမ၏ခြေလှမ်းများမှာ အိမ်အ၀င်လမ်းမတွင်ခင်းထားသော အုတ်ခဲကျိုးလေးပေါ်တက်နင်းမိရင်းလဲပြိုသွားလေသည်။
သူစားဖို့အတွက် ထမင်းပွဲပြင်နေစဉ် သူမကတော့ သမီးလေးနှင့်ဆော့နေလေသည်။သူမ မူးလာလျင် ကျွှန်တော့်ကိုသာရန်လုပ်သည်၊သူမ သမီးနှင့်သားကိုတော့ အလွန်ချစ်ရှာလေသည်။သူမမှာပြောစရာဆို၍ အရက်ကိုနှစ်ချိုက်ခုံမင်စွာသောက်ခြင်းသာရှိသည်။ထမင်းပွဲပြင်ရင်း သူမနှင့်ညားကာစရက်တွေကို လွမ်းဆွတ်မိလေသည်။ထိုစဉ်က အရက်သောက်တတ်မှန်းသိသော်လည်း မူးလာရင်သွေးဆိုးမှန်းမသိသေးပေ။နောက်တော့လည်း .......
သမီးကို စနေရင်းမှ ယိုင်ထိုး ယိုင်ထိုး နှင့်ထလာကာ ထမင်းပွဲကိုကြည့်ရင်း .............
ကျွှန်တော့်ရဲ့ သီးခံနိုင်မှုအတိုင်းအတာ ကုန်ဆုံးသွားလေပြီ။
သားနှင့်သမီး အတွက် လိုအပ်တာတွေထည့်ကာအိမ်ပေါ်မှဆင်းလာသည့်အချိန်က ည ၁၂း၀၀ နာရီကျော်နေပြီ၊
သူမကို ကြည့်လိုက်တော တခူးခူးနှင့်အိပ်ပျော်နေလေပြီ။
အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲနေပေမဲ့ သူမအကြောင်းပဲစဉ်းစားနေမိသည်။သမီလေးကတော့ ဘေးမှာနှစ်ချိုက်စွာအိပ်မောကျနေလေရဲ့။သူမအကြောင်းစဉ်းစားရင်း မိုးလင်းခါနီး မှအိပ်ပျော်သွားသည်။
အိပ်ရာမှ နိုးလာတော့ အတော်ပင်နေမြင့်နေလေပြီ။သမီးလေးက အခန်းထဲဝင်လာပြီး
ကမန်းကတန်းအောက်ကိုဆင်းကြည့်တော့ ဧည့်ခန်းထဲမှာ အမေနှင့်အတူ မျက်နှာငယ်လေးနှင့် ထိုင်နေသော သူမကိုတွေ့လိုက်ရသည်။
ဒီလိုပါပဲ ဘ၀ဆိုတာ တခါတလေတော့လဲ ပျော်ရွှင်ရတာရှိသလို ၀မ်းနည်းစရာ၊စိတ်ညစ်စရာတွေကိုလဲ လက်ခံနိုင်ရမှာပေါ့၊ဒါမှ ဘ၀ ဆိုတာပီသတော့မှာပေါ့....................
ကျွှန်တော် ပြန်လိုက်သွားလိုက်ဦးမယ်နော်..... :P
တစ်ခုခုကိုမှီတွယ်ပြီးပေါက်ဖွားလာတဲ့အရာဆိုရင်အဲဒါ...အချစ်မဟုတ်ဘူး..အချစ်ဆိုတာမြေမထိ...ပန်းစကြာဝဠာထု၏....နန်းတော်စိတ်ထဲက....တောင်ထွတ်အိမ်မက်တို့ ၏....ပြတင်းပေါက်တိမ်တိုက်တို့ ၏....သက်တန့် ရောင်စုံ။အချစ်ဆိုတာ..ဘာကိုမှမှီတွယ်မထားပါဘူးနှလုံးသားကိုသာမှီတွယ်ပြီး..ကဘာလောကတစ်ခွင်လုံးကိုဖုံးလွှမ်းအုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဘ၀တို့ ၏ဧကရာဇ်..သစ်စာတရား၏တမန်တော်..မှီတွယ်ရာနှလုံးသားကိုလှိုက်စားတတ်သည့်နွယ်ပင်တစ်မျိုး.....။
ရင်ခုန်သံဆိုတာမေ့နေတာကြာပေါ့...သတိလာပေးတဲ့ ကောင်မလေးရေမင်းအရွယ်က ငယ်ပါသေးတယ်ကွာမင်းအတွက် အမှတ်တရပစ်မှတ်တွေကငါ့အတွက် မထူးဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်နေတယ်...စိတ်ကစားတဲ့မင်းအရွယ်နဲ့တည်ငြိမ်စပြုနေတဲ့ ငါ့အရွယ်ကိုနားလည်ပေးလိုက်ပါကွာ...မင်းကထွက်ပေါက်ရှာပေမယ့်အသက်လောက် ချစ်သွားရင်ခက်ကုန်ရချေရဲ့ကွယ်...အရွယ်ရောက်နေပေမယ့်မရင့်ကျက်သေးတဲ့နှလုံးသားကိုမင်းကရိပ်မိနေတော့လဲငါ့အတွက်ကတော့ပြေးသာပြေးရ ခြေလှမ်းကမသွက်မေးသာမေးရ ရည်မှန်းတာကအခက်ပေါ့ကွာ...အင်း...နောက်ဆုံးတော့လည်းမာယာကျော့ကွင်းကျေနပ်စွာ လဲပြိုကျခဲ့ရပေါ့...အံကြိတ်ပြီး မာန်တင်းခဲ့တာသာအဖတ်တင်ခဲ့ရပေါ့မျက်မြင်မတွေ့လိုက်လို့ တော်သေးတာပေါ့လေ..... :)
တူညီရာလမ်းတွေကို မင်းနဲ့ငါ လျောက်ခဲ့ဖူးတယ်နော်.....
အခုတော့ နှင်းကျလို့ စိုကုန်ပြီ.....
လွမ်းတယ်ကောင်မလေးရယ်. .ဘယ်ကဗျာတွေဆီကိုပဲရောက်ရောက်နင်ရဲ့စိတ်ကို တံခါးလှမ်းလှမ်းခေါက်မိတယ်. .ငါကိုငါလွယ်အိတ်လို ဆွဲဖြဲဖူးပါရဲ့ဒါပေမယ့် ကျောင်းတော်ကဖြင့်အခုထိမြူပြာတွေထဲမှာ ပွင့်နေတုန်း. . .ချစ်ခြင်းတရားဟာငါ့အတွက်တော့ တချို့ခေါင်းလောင်းကြိုးတွေလိုပဲဘယ်လိုဆွဲဆွဲ တံခါးကပွင့်မလာခဲ့ဘူးဒီအရွယ်မှ ဆောင်းဦးပေါက်မိတာလည်းမထူးတော့ပါဘူး . . .အစကတည်းက သူငယ်ချင်းဆိုတာ . . . ဆွတ်ခူးဖို့မှမဟုတ်ဘဲ......တာရာမင်းဝေ
You received this email because you are subscribed to the real_time feed for http://kyawkyaw1.blogspot.com/feeds/posts/default. To change your subscription settings, please log into RSSFWD.